Fikradda naqshadeynta madadaalo ee ragga iyo dumarka - Fikradaha farshaxanka ee Tattoos
Quruxda dharbaaxada balwad aan la iskudiin karin. Dufcadaha waxaa jecel yahay qof kasta oo dabiiciga ah. Dumarka badanaa waa kuwa aan aragno cidda dharbaaxada ku jirta jirkooda sida tattoo. Nooca iyo midabada dhiciska ayaa ah waxa iyaga ka dhigaya inay ku fiican yihiin shaqada farshaxanka. Dhibaatadu waa qayb ka mid ah jirka oo balwadku aanu si fiican u matali Karin.
Miyaad ku adagtay dhibaatooyin ama caqabado nololeed oo aad ka heshay? Isticmaalka duufaanka sida tattoo ayaa kaa caawin kara inaad xasuusato.
Macnaha erayga "tattoo"
Butterfly waxay ka hadlaysaa ruuxa iyo jacaylka. Waxay muujin kartaa maskax iyo xitaa jacayl, rabitaan iyo jacayl. #Butterfly waa mid aad u qurux badan oo midabo leh taas oo ah sababta ugu weyn ee dumarku marwalba rabi lahaayeen in ay ku helaan jidhkooda. Farshaxanka iyo sharafku wuxuu ku faafaa marka la qoro waa mid cajiib ah. Waa shaqo ee qof xiran si loo go'aamiyo halka ay ku yaalaan #tattoo.
Tattoo bjørn waa qurux badan oo cajiib ah. Balastariga ayaa loo yaqaanaa inuu maro isbeddelo qaar ka hor inta aaney qurux badneyn. Natiijo ahaan, macnooyin badan ayaa la xidhiidha jilicsanaanta sida sarakicidda iyo dhalashada. Masiixiyiintu waxay u qaadanayaan kabuubka sida Ciise Masiix sara kicinta kuwii dhintay iyo samadiisii ​​cirka.
Tartu waxay sidoo kale ka dhigan tahay jacayl, kacsanaan iyo dib-u-celin, Ruuxa iyo Ruuxa, Isbedel, Naxariis, iyo Naxari, Naxari iyo Nabad. Waxaa jira dhowr sawir oo kaliya oo kaa dhigaya inaad joojiso oo aad dalbato macnaheeda. Mid ka mid ah shaati-galada noocan oo kale ah waa tufaaxa balastarka shimbiraha ee ku yimaada kala duwanaanta iyo qaababka. Sidoo kale, Celtic Butterfly Tattoos waa calaamad u ah Ruuxa iyo Paganism. Waxaa jira xuubka kansarka naasaha oo la yiraahdo tattoo oo ah wadahadal ku saabsan sidoo kalena u taagan Rajo iyo Dib-u-hagaajin kuwa kuwa badbaaday.
1. Ubaxyo qashin iyo kabo naqshadeynta quruxda qurxinta ee gabdhaha
Sheekooyinka ugu dhiirigeliya ayaa loo sheegaa sawir-qaadista. Dumarka ka badbaaday kansarka naasaha ayaa maanta la arkey, iyagoo isticmaalaya dhicin si ay u daboolaan nabaro ku dhaca qaybaha ay dhibaatadu saameysey. il image
2. Ahraamta iyo kabaha gadaal ujir ah oo loogu talagalay gabdhaha
Cabbirka balastarkaagu wuxuu ku xirnaan doonaa meesha aad rabto inaad ka baxdo jirkaaga. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka fekereyso wax ka weyn, bowdada, caloosha ama dhabarka ayaa noqon kara meesha ugu fiican ee taas. il image
3. Cagaarshaha cagaarka ee cagaaran ee naqshadda loogu talagalay haweenka dhabarka
Fannaanka ayaa kaa caawin doona in aad la socoto habka aad u dooran lahayd tattoo saxda ah ee naftaada haddii aadan weli go'aansan. il image
4. Calaashka qajaarka ee cagaarka ah ku dheji fikradda macaamiisha
Dhibaatooyin, waayo-aragnimo xun iyo xanuunka ayaa lagu bedeli karaa dhicin-u-qulqulo oo loo yaqaanno xayawaanka quruxda badan. Ma waxaad tahay gabadha isku deyeysa inay muujiso dhinacaaga dumarka? il image
5. Qaab dabiiciga ah oo loogu talagalay dumarka
Haddii aad tahay qof jecel duufaanka, waxaad u dhigi kartaa miisaan yar yar iyada oo aan luminaynin quruxda la socota dhirta dabiiciga ah. il image
6. Calaashka qajaarka cagaarka ah ee caato naqshadeynta
Tag tattoo jilbaha. Waxaa laga yaabaa in aad tahay nin jecel dabeecadda oo uu leeyahay qandho si uu u qariyo; dhicin waxay noqon kartaa fursadaha ugu fiican ee adiga kugu habboon. il image
7. Compass iyo rinjiga finanka ah ee loogu talagalay gabdhaha dhabarka
Waxaad ku dari kartaa madadaalo balan-barkadaada ah adiga oo u abuuraya ubaxyo ama shay kale oo daneynaya. il image
8. Music xusuusta iyo kabadhada dib u celinta fikrada tattoo ee gabdhaha leh farriin; rumee
Dhammaadka maalinta, waxaad ku faraxsan tahay in aad heshay muuqaalkan quruxda badan ee jirkaaga. Waxaad ku dhejin kartaa inta badan dhirta sida aad jeceshahay xitaa ereyada jilicsan ee lagu qoray iyaga. il image
9. Fikradda quruxda badan ee balastarka ah ee loo yaqaan 'tattoo' ee loogu talagalay dadka xifdinta leh
Baalalka lo'da ayaa ah midabyo iyo jilicsan. Baalalkan waxaa loo yaqaanaa inay muujiyaan naxariis iyo roonaan ka dib duufaan; haddana waxay muujinayaan awood ay ku guuleystaan ​​caqabadaha. il image
10. Fikradda iyo ubaxyada casriga ah ee naqshadeynta
Waxaa jira noocyo kala duwan oo duufaan ah oo laga yaabo inaad doorato haddii aad diyaar u tahay tattoo qurux badan. il image
11. Small caloosha fikradaha sawir-celinta ee jimicsiga
Taraashadu waxay aad u quruxsan yihiin oo waxaad abuuri kartaa qaar ka mid ah qaybaha xasaasiga ah ee jirkaaga. il image
12. Cagaarka buluugga ah ee cagaarka ah ee caanaha madow ku rid fikradda dhabarka
Isku xidha waxyaabaha la xiriira dabiiciga ah ee leh tattoo qurux badan. Waxaad ka bixi kartaa tattoo qayb kasta oo ka mid ah jirka iyo farshaxanku wuxuu ahaan doonaa mid cajiib ah. il image
Halkan riix halkan si aad uhesho naqshado badan
tattoos cagtatattoos eaglekoi kalluunkaDhaqdhaqaaqatattoos sleevehenna tattootattoo indhahasawirada malaa'igtatattoos ubaxtattoos qosol lehTattoo infinitytattoo dheemantattoos qorraxdatattoo tilmaangaraacista gacmahatattoo maroodigamuusikada muusikadaTilmaamta jaalaha ahtattoos iskutallaabtasawirrada raggatattoos qoortaarrow Tattoowaxay jecel yihiin tattooswaxaa la dhajiyay tattooscalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahlammaanahatattoos gacantaTartoo ubax badansawirada gabdhahatattoos moonfikradaha tattootattoo biyo ahtattoos saaxiib saxa ahshimbir shimbirlibto libaaxtaraagada kubbaddajimicsiga bisadahasawir gacmeedlaabto laabtaTattoo Feathertattoo ah octopusJoomatari Tattoosnaqshadeynta mehndigadaal u laabotattoos taajkiitattoosshaatiinka shiidantattoos qabaa'ilkaku dhaji tattoosTattoos Wadnaha